Mampiasà mpandika teny eo noho eo: Smartphone na fitaovana hividianana 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Rehefa mandeha any ivelany isika, ny olana lehibe indrindra dia tsy isalasalana fa ny teny vahiny: na dia miteny anglisy kely aza izao ny tsirairay, dia sarotra amintsika ny mampahafantatra ny tenanay amin'ireo tompon-toerana ao, indrindra raha tsy miteny irery izy ireo. lela. Soa ihany fa lavitra be ny teknolojia fandikan-teny tato anatin'ny taona vitsivitsy ary azo atao izany, amin'ny alàlan'ny fitaovana kely azo entina, mahazo fandikan-teny haingana sy haingana eo am-panombohantsika dinika.
Amin'ity toro-lalana ity dia hasehontsika anao tokoa ireo mpandika teny eo noho eo indrindra azonao atao ny mividy an-tserasera mba hahafahanao miteny sy mandika amin'ny fiteny eo an-toerana ary ny mifamadika amin'izany dia mihaino ny diniky ny mpanelanelana aminay ary mahatakatra ny teny tsirairay voalaza. Ireto fitaovana ireto dia tena ilaina sy azo ampiharina ary azo ampiasaina amin'ny dia rehetra any ivelany.
VAKIO IHANY: Ny fampiharana diksionera sy mpandika teny amin'ny fiteny maro indrindra ho an'ny Android sy iPhone
Mpandika teny farany tsara indrindra
Ireo mpandika teny eo noho eo dia manana fampiasa maro karazana ary, alohan'ny hividianana ny maodely voalohany izay hitantsika avy hatrany dia mendrika hatrany ny mijery ireo toetra tokony hananan'ireto fitaovana ireto, ka safidio ihany ny maodely mifanaraka amin'ny ilaintsika. ilaina ny fandikana.
Mpandika teny amin'ny fotoana tena izy
Ny mpandika teny eo noho eo dia tsy maintsy manana ireto toetra manaraka ireto hamaritana toy izany ary afaka mamaly ny filànay amin'ny fandikanteny rehetra:
Fiteny fanohanana- iray amin'ireo masontsivana lehibe indrindra, satria misy maro ny mpandika teny eo noho eo misy ary mila misafidy iray izahay izay manohana farafaharatsiny ireo fiteny na fiteny be mpitia indrindra izay mety hananantsika olana rehefa any ivelany isika. Ka alao antoka fa manohana ny anglisy, espaniola, frantsay, rosiana, sinoa, japoney, Hindi, ary portogey izy io.
Fomba fandikana- Ho fanampin'ny fiteny tohana, andao hofaritana fa ny mpandika teny eo no ho eo dia manana fomba fandikana hafa. Ny tsotra indrindra dia ny fandikan-teny mivantana (manomboka amin'ny fiteny A ka hatramin'ny fiteny B na ny mifamadika amin'izany), fa ny maodely lafo vidy kokoa sy mandroso kosa dia mamela ny fandikana eo noho eo ho amin'ny fiteny roa samy hafa, nefa tsy mila manindry bokotra na mametraka fiteny alohan'ny fifanakalozan-kevitra (fandikan-teny roa) .
Conectividad: hahafahana mandika amin'ny fomba mahomby sy haingana, ny ankamaroan'ny mpandika teny eo noho eo dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny Internet, mba hahazoany tombony amin'ny motera fandikan-teny an-tserasera sy ny faharanitan-tsaina artifisialy novolavolain'ireo mpanamboatra ireo fitaovana ireo. Ny maodely tsotra indrindra dia mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny finday avo lenta (izay tsy maintsy ampifandraisina amin'ny Internet hatrany), fa ny maodely lafo vidy hafa kosa dia manana Wi-Fi, Bluetooth ary karatra SIM natokana hahafahana mifandray tsy miankina amin'ny toe-javatra rehetra.
fizakantena: satria fitaovana entina mandehandeha ireo dia manana bateria lithium-ion anatiny izy ireo, afaka miantoka fandikan-teny farafahakeliny 5-6 ora alohan'ny hisintomana maharitra. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mitondra charger USB mifanentana foana na, satria any ivelany isika, koa powerbank manana habe sahaza (toy ireo hita ao amin'ny torolàlana. Ahoana ny fitazonana ny finday avo lenta voasazy foana).
Habe sy endrika- Ny endrika sy ny haben'ny mpandika teny dia tena manandanja ihany koa, satria ny mpandika teny eo noho eo dia tokony ho mora tazonina ary mety hivadika sy ho faty koa rehefa ilaina izany. Na dia misy aza ireo fitaovana isan-karazany misy endrika samihafa dia manandrana mikendry modely miendrika ergonomika foana isika (amin'ny endrika fandraisam-peo).
Raha manaja ireo toetra ireo ny fitaovana dia afaka manondro azy ireo amin'ny masontsika isika, azo antoka ny vokany tsara.
Mpandika teny izay azonao vidina
Aorian'ny fahitana ireo fiasa tokony hananan'ny mpandika eo noho eo dia andao hojerentsika hoe inona avy ireo fitaovana azontsika vidiana amin'ny Amazon, izay efa iray amin'ireo mari-pamantarana ho an'ny varotra elektronika an-tserasera noho ny fiantohany feno, izay noresahinay koa tao amin'ilay torolàlana . Ny antoka nataon'i Amazon dia hamerina ny vola nolaniana tao anatin'ny roa taona.
Anisan'ireo mpandika teny haingana indrindra sy mora indrindra ahitantsika ny Travis Touch Go, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 200 €.
Ity fitaovana ity dia afaka mandika fiteny 155 amin'ny mode bidirectional (miaraka amin'ny fandikan-teny azo alaina ao anatin'ny iray segondra), manana Wi-Fi, Bluetooth ary fifandraisana amin'ny tamba-jotra data (amin'ny alàlan'ny eSIM) ary, rehefa mifandray amin'ny Internet, dia mampiasa faharanitan-tsaina mandroso. karazana rahona artifisialy manampy antsika amin'ny fandikan-teny amin'ny fotoana tena izy. Ity mpandika teny ity dia miaraka amin'ny efijery mikasika 2,4-inch sy lakile fiasa maromaro hisafidianana ny fiteny handikana azy.
Mpandika teny tsara hafa afaka hodinihintsika ny Smart Vormor Translator, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 250 €.
Ity fitaovana ity dia manana endrika ergonomika sy matevina, efijery miloko 2.4 santimetatra ary fakan-tsary any aoriana, ahafahana mandrafitra sy mandika na dia ireo afisy sy hafatra izay hitantsika eny an-dalamben'ny firenena vahiny aza. Misaotra ny fifandraisana tsy misy tariby, mamela ny fandikan-teny eo noho eo sy amin'ny zotram-pitenenana hatramin'ny 105 fiteny, miaraka amin'ny tena marina azo antoka.
Raha mifanohitra amin'izany no tadiavinay ny mpandika teny efa mandroso natokana ho an'ny mpanjifa, ny fitaovana voalohany hodinihina dia ny Basque Mini 2, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 300 €.
Mampahatsiahy ny Apple iPod Minis ny famolavolana teo aloha, ary ho mora entina, mora ihany koa ny mitondra azy, ka azonao atao foana ny mitondra azy aminay tsy hatahotra ny ho simba na ho very. Amin'ny maha mpandika teny azy, dia manohana hatramin'ny fiteny 50 izy io, manolotra fomba fandikan-teny roa tonta ary afaka mifandray amin'ny tambajotran-drakitra finday maimaimpoana, na aiza na aiza eran'izao tontolo izao (noho ny fifanarahan-dia ataon'ny mpanamboatra, izay miantoka ny fidirana amin'ny LTE).
Raha mifanohitra amin'izany no tadiavina fitaovana fandikan-teny roa làlana sy azo ampiharina toy ny headphone dia afaka mifantoka amin'ny vokatra avo lenta isika. WT2 Plus, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 200 €.
Mampahatsiahy ny Apple AirPods ireo headphone ireo fa mpandika teny roa sy iraisan'ny rehetra izy ireo, apetrak'ilay rindrambaiko (hapetraka ao amin'ny finday). Raha vao mifandray amin'ny fampiharana fandikan-teny natokana ianao, ny hany sisa ataonao dia ny mampita ny finday amin'ilay mpiresaka amintsika ary manomboka miresaka amin'ny finday hafa: afaka miteny amin'ny fiteninay isika, azo antoka fa hahatakatra antsika ilay olona iray hafa, ary afaka hahatakatra ny zava-drehetra koa isika. hoy izy. Ity mpandika teny amin'ny finday mahavariana ity dia mandika fiteny 40 sy accents 93 isan-karazany, mba hahafahanao mahatakatra ny dinika ataon'ny faritra manokana ao amin'ny firenena voafidy.
Ampiasao ny smartphone anao ho mpandika teny amin'ny fotoana tena izy
Raha tsy mividy zavatra, azonao atao ihany koa ny mampiasa ny Maody mpandika teny amin'ny fotoana tena Google Translate amin'ny firy koa izao tafiditra ao amin'ny Google Assistant izay misy amin'ny fitaovana Android sy iPhone ankehitriny. Ny fandikan-teny dia manohana fiteny 44 hisafidianana, anisan'izany ny Arabo, Anglisy, Frantsay, Alemanina, Grika, Italiana, Japoney, Portigey, Espaniôla ary maro hafa. Raha vantany vao navadika ny maody mpandika teny, dia afaka miteny fotsiny ao amin'ilay fitaovana ianao mba hampisehoana ny fandikan-teny aseho eo amin'ny efijery ary vakian'ny Mpanampy Google amin'ny feo avo mba hahafahanao miresaka amin'ny olona miteny fiteny samihafa.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba mpandika teny an'ny Google Assistant
Amin'ny telefaonanao, sokafy ny Google Assistant amin'ny fitenenana hoe "Ok Google" na amin'ny fanokafana ny app Google ary kitiho ny bokotra mikrô ao amin'ny bara fikarohana. Mba hanombohana ny maody mpandika teny dia lazao fotsiny hoe "Salama Google, ho mpandika teny rosiana"na ny fiteny tadiavinao. Azonao atao koa ny mampiasa baikon'ny feo hafa toy ny:"Ampio aho hiteny espaniola"Na"Fandikana avy amin'ny Romanianina ka hatramin'ny Holandey"Na tsotra:"Mpandika teny frantsay"O"Ampandehano ny maody mpandika teny".
Hanontany anao ny mpamosavy avy eo raha tsindrio ny bokotra microphone ary manomboka miteny. Eo amin'ny efijery dia azonao atao ny mamaky avy hatrany ny fandikan-teny sy andian-valiny amin'ny fiteny voadika mba hanohizanao hanao resa-be.
Hatramin'ny taona vitsy lasa izay, mpandika teny manerantany dia noforonina siansa madio, fa androany kosa dia mora vidina amin'ny Amazon izy ireo ary miasa tsara ihany koa, manampy antsika handresy ny sakana amin'ny fiteny rehefa mandeha any ivelany.
Mikasika ny lohahevitr'ireo mpandika teny hatrany, dia mamporisika anao izahay mba hamaky ny torolalanay ihany koa Fomba fampiasana mpandika teny ary mandika miaraka.
Izahay ve mitady mpandika teny roa amin'ny Skype? Azontsika atao ny mampiasa ny mpandika teny mitambatra, toy ny hita ihany koa ao amin'ny torolalana. Skype Translator ho mpandika feo mandeha ho azy amin'ny resadresaka amin'ny feo sy horonan-tsary.
Aleo PC sa andiany PS5 / Xbox hilalaovana?